Funaanad Wasmo Ah Oo La Qaawiyey Laabsaalax Iibso Boob yaryar oo jacayl ah oo khadka tooska ah ah - Urdolls
Soo Iibso Naasaha Super Flat Naasaha Dolls Dolls Qiimo jaban
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo caruusadaha dhabta ah. Ma jeceshahay gabadha yar ee dameerka weyn ee Aasiya? Dhib malahan, dabcan xulashooyin badan ayaa noocan ah. Waxaad ka heli doontaa dhamaan caruusadaha caruusadaha jilicsan ee jilicsan ee aad qiyaasi karto dhadhan kasta iyo miisaaniyad kasta. Waxaad ka heli kartaa gabar japanese ah oo fidsan halkan. Marnaba ma noqon doonto sida haweeney dhab ah oo kaa hor imaaneysa ama muujineysa rabitaan raaga. Oo iyada kaliya looma isticmaali karo siigaysiga. Waxay sidoo kale kula fadhiisan kartaa miiska iyo TV-ga hortiisa. Waad wada daawan kartaa filim jilicsan oo jilicsan.
Waxaa jira rag badan oo raba inay la kulmaan riwaayadaha dhabta ah ee laabta doll fidsan. Waxay ku doorteen moodellada dhabta ah halkan. Isla mar ahaantaana, waxaan had iyo jeer raadineynaa isbeddello cusub oo moodal jilicsan oo jilicsan oo jilicsan oo jilicsan oo jilicsan si aad u siiso kobaca joogtada ah ee alaabada. Marka loo eego tayada, caruusadda galmada waxay dhab ahaan dareemeysaa inay tahay naag dhab ah, sidaa darteed waxay sifiican u dabooli kartaa baahida ragga. Haddii aad rabto inaad khusayso laakiin aad ku noolaato jacayl, tani waa xalka ugu dambeeya. Sababtoo ah kalsoonidiisa cajiibka ah, waxaa badanaa loo adeegsadaa tusaale loogu talagalay sawirrada iyo xitaa tusaale ahaan. Kala duwanaanta nolosha sida caruusadaha galmada laabta yar ee fidsan ayaa la mid ah muuqaalka dhabta ah.
Waxaan si ula kac ah u abaabulnay xaflad caruusad tpe laabta ah oo fidsan. Ma caruusadda yar yar ee naasaha lagu cayaaro ma ku soo jiidataa adiga? Xafladan weyn, lol yar yar iyo caruusado yaryar oo jilicsan ayaa xidha dharka ugu quruxda badan xaflada. Waxay leeyihiin shaqooyin iyo shaqsiyad u gaar ah, laakiin sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay, waa gabdho aan isqabin, sida haddii ay raadinayaan qoob ka ciyaarka ay jecel yihiin, diyaar ma u tahay? Xafladan waxaa loogu talagalay kali ama dadka dareema go'doon. Dad badan ayaa halkan ka helay kuleylka guriga. Kaalay ku soo biir adduunkan xiisaha leh oo kama qoomameyn doontid.
Odelia - 155CM Lovely Lady Naaso Yar Naago Jaceyl Oo Qaawan TPE Sex Doll
Lizzie - 155CM Bright Indho Weyn oo Qiyaas Baaxad Leh Qabiil Princess Princess TPE Jinsi Doll
Daphne - 155CM Korean Girl Petite Ass Black Indhaha TPE Jinsi Doll
Winni - 155CM Aasiya Gabar Aasaasi ah Ciyaaraha Galmada Dadka Waaweyn ee Naasaha Yaryar Naasaha TPE Wasmo Doll
Lugaha dhaadheer Khafiifka ah bushimaha dhumucda Madoow TPE Doll Cynthia Hood 155CM Laab Yar
Micro Fat Round Face TPE Doll 158CM Adolph Joule Naaska Yar ee Booliska Naaska Yar Yar oo Finalo ah
Indho Wanaagsan TPE Doll Hannah Sassoon sayidkii fikirka 158CM
Urdolls Sexy Flat Naag La Qaawiyey Naag Iskuulada Doll Collection